Macalimiin lagu xir xiray magaalada Berbera (Waa maxay sababta?) – Balcad.com Teyteyleey
Macalimiin lagu xir xiray magaalada Berbera (Waa maxay sababta?)
Maamulka Somaliland ayaa markii ugu horeysay xabsiga dhigay Macallimiin lagu eedeeyay inay bixiyeen qish ku saabsan imtixaanaadka shahaadiga, iyagoona adeegsaday Taleefanka Mobile-ka gacanta iyo barnaamijyada casriga ah ee Internet-ka bulshada ku xiriirto.
Guddi loo xilsaaray ilaalinta imtixaanaadka ayaa sheegay in laba ka tirsan macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada magaalada Berbera ayaa xabsiga la dhigay, kuwaasi oo lagu eedeeyay inay arday siiyeen qish ku saabsan imtixaanaadka.
Wasiirka Waxbarashada Somaliland Cabdullaahi Dheere ayaa sheegay in macallimiinta la xiray ay ardayda ka urursadeen lacag dhan Kun Dollar, iyagoona u fududeeyay sidii ay ku heli lahaayeen imtixaanka oo ardaydana ay ku sawirteen taleefanadooda gacanta.
“Markii ay ardayda isku dayeen inay daaqadda ka gudbiyaan jawaabihii ayaanu qabanay sharciga ayaana la hor geynayaa” ayuu yiri Wasiir Cabdullaahi Dheere oo sheegay inay qaadayaan tallaabooyin kale isla markaana si dhow loola soconayo cid kasta oo falkaasi ku yeelata.
Hasse ahaatee wasiir waxbarashadda C/laahi Dheere ayaa nidar ku galay inuu dabar goyn doono qishkii,isla markaana dadkii ilaalinayey la kordhiyey, iyadoo fasal walba laba macalimiin iyo askar dheeraad ah lagu kordhiyey si loo adkeeeyo in Imtixaanka la helo ama la sawirro.
Gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Daa’uud Axmed Faarax ayaa sheegay inay ardaydii ka ururiyeen moobiladii, waxaanu sheegay in dadka ardayda lugaynaya ee Imtixaanka doonaya inay WatsApp-kaga shaqeeyaan la xidhi doono, cid kasta oo qoraal usoo dirta moobilada ay hayaana ay sharciga dhigi doonaan.
Sanadihii u dambeeyey ayaa ardaydu caadaysteen inay qishaan imtixaanka,isla markaana moobilada casriga ah inta lagu sawiro ka dibna macalimiinta dibadda joogta loo diri jiray imtixaankii oo sawiran, waxaana jawaabta lagu soo siin jirtay adeega casriga ah ee Internetka ee WatsApp-ka loo yaqaan.
The post Macalimiin lagu xir xiray magaalada Berbera (Waa maxay sababta?) appeared first on Ilwareed Online.
Somaliland oo heshiis kale la gashay Imaaraadka Carabta